Ilaa intee Sharciga la waafajiyay soo xiristii iyo siideyntii siyaasiga C/raxmaan C/shakuur ? - Ceelhuur Online
Home > Uncategorized > Ilaa intee Sharciga la waafajiyay soo xiristii iyo siideyntii siyaasiga C/raxmaan C/shakuur ?
Ilaa intee Sharciga la waafajiyay soo xiristii iyo siideyntii siyaasiga C/raxmaan C/shakuur ?
December 24, 2017 admin664
Waxaa Diyaariyey: Dr. Daahir Maxamed Cali
Al-Shabaab oo 5 dhalinyaro ah ku toogtay deegaanka….
Kheyre oo 40 cisho kadib ku laabtay Muqdisho.
Xarunta Daaweynta iyo Qalliimada Isku-furanka oo Xariga laga jaray (Sawirro)